Vana Chiremba Vodzoka Kubasa Zvichitevera Chibvumirano Chavaita neHurumende
Kurume 31, 2018
Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vatanga kudzokera kubasa neMugovera zvichitevera kuwirirana kwavaita nehurumende pazvimwe zvezvichemo zvavo zvavanga vachida kuti zvigadziriswe.
Vana chiremba vanoti vatambira zvavavimbiswa nehurumende zvichitevera musangano wavaita ne Health Services Board.
Izvi zvinotevera kurudziro inonzi yakaitwa nemutungamiri wenyika, Va Emmerson Mnangagwa, yekuti zvichemo zvavana chiremba zvigadziriswe.
Hurumende inonzi ichaisa parutivi mamiriyoni gumi emadhora kuti ishandiswe mukukweretesa vari mubazi rezvehutano.
Vana chiremba vanotiwo mari dze on call allowance dzawedzerwa kubva padhora rimwe nechidimbu, kusvika pamadhora manomwe nechidimbu pa awa imwe chete.
Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa kutanga kwemwedzi uno, uye vanga vapedza mazuva makumi matatu vachiramwa mabasa. Asi vati kana hurumende ikadududza pane zvayavimbisa, vana chiremba vachadzokera zvakarare mukuramwa mabasa pasina chiziviso.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvehutano, Va David Parirenyatwa, kanawo sachigaro we Health Services Board, Dr Lovemore Mbengeranwa, kuti tinzwe mativi avo.
Asi mutauriri we Zimbabwe Hospital Doctors Association, Va Mxolisi Ngwenya, vanoti kunyange hazvo vasiri kunyatsokufara nezvavimbiswa nehurumende, vadzokera kumubasa sezvo vari kunzwisisa dambudziko rakatarisana nehurumende.
“Asi taudzawo hurumende kuti inofanirwa kuita zvainenge yavimbisa kuitira kuti tisadzokere zvakare mukuramwa mabasa,” vadari Dr Ngwenya.
Vana chiremba vanosvika chiuru vanga vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo, uye kuvawanisa zvikwanisiro zvekushandisa vari pabasa, kuwaniswa mari dzekutenga motokari nezvimwe zvinokosha mukushanda kwavo.
Gwaro riri mumaoko eStudio7 rinoti vana chiremba vachange vowana mari inoita chiuru nemazana maviri emadhora pamwedzi semari ye on call allowance uye vachisungurwa kushanda kwemaawa zana nemakumi matanhatu pamwedzi wega wega.
Chiremba anenge achishanda husiku achange achiwana mari iri pakati pemazana maviri ane madhora manomwe kusvika pamadhora mazana matatu nemadhora matatu pamwedzi, pamusoro pemari yaanotambira pamwedzi wega wega.
Gwaro iri rinotiwo hurumende ichaumba homwe yemari inosvika mamiriyoni gumi emadhora iyo ichakwereteswa vashandi vose vari mubazi rehutano mukutenga motokari vachizodzosera ine muripo wezvikamu zvitatu kubva muzana, kana kuti 3% annual interest.
Chibvumirano chasainwa neMugovera, Kurume 31, 2018, pakati pehurumende navana chiremba vakamirirwa nemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr Amos Tsopo, chinotiwo hapana chiremba anofanirwa kushungurudzwa, uye chibvumirano chitsva chebasa, kana kuti contract, chinofanirwa kuitwa musi wa 5 Kubvumbi, 2018, uye chichashanda kwemakore maviri nechidimbu, kana kuti makumi matatu emwedzi.
Hurukuro naDr Mxolisi Ngwenya